DLULA I-Hillsboro Airport KHIO FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 988 MB
Play 5 506
Umbhali: Rick Keller
Nansi i-Hillsboro Airport (KHIO) i-Oregon USA, le ndawo yashicilelwa ngokubambisana ne-2014 Oregon International Air Show. Indawo equkethe ukuhlobisa okukhulu kwezinto ezenziwe ngumbhali nabanye abaculi balo mcimbi.
Phakathi kwezinto eziningi ezibekwa endaweni, i-MiG-21 yeNdunankulu ye-Premier Space isetshenziselwa ukuqala ama-satellite. Kuhlanganisa isithombe-real real textures, ebusuku texture, Nike hangar. Indawo evelele kakhulu futhi inesithombe esikhulu emhlabathini.
Imininingwane: Umbhali wezimpawu ezibonisa ukubukeka kwabasebenzisi beRikoooo ukuthi akavumeli ukubuka okungaphezulu kokwe-simulators azihlolile ngokwakhe (isibonelo: Prepar3D)